Yoo mukaaf sujunnee ayyaana irreechaa khabajuu baanne oromummaan kan nurraa fuudhamtu yoo taate oromummaa akkanaa hin barbaannuu. – Welcome to bilisummaa
As wr wb. Yoo mukaaf sujunnee ayyaana irreechaa khabajuu baanne oromummaan kan nurraa fuudhamtu yoo taate oromummaa akkanaa hin barbaannuu.
Posted by Alii Sufiyan on den 2 oktober 2015
Yoo mukaaf sujunnee ayyaana irreechaa khabajuu baanne oromummaan kan nurraa fuudhamtu yoo taate oromummaa akkanaa hin barbaannuu.
Previous Wal bekuu irra waliif beekuu wayya jedhaamiti ree Oromon wayta dubbatu.!!!
Next Debii Waqeffataa Abba Abdisaa Dhaabaa lalchiise OMN